MUQDISHO, Soomaaliya - Xoghayihii 7aad ee Qaramadda Midoobey, Kofi Annan ayaa shalay ku geeryooday dalka Switzerland, isagoo 80 jir ah, waxaana dhimashadiisa loo tiiriyay xanuun kusoo booday.
Madaxtooyadda dalka Soomaaliya oo ka hadashay geerida Annan waxay tilmaamtay inay aad uga murugooneyso dhimashadda Kofi Annan, waxayna ku dhimaamtay sharci-dijiye aan caadi ahayn, kaasoo waqtigiisa u huray inuu dunida wanaajiyo.
"Aad ayaan uga muragooneynaa dhimashada Kofi Anan. Waxuu ahaa sharci-dejiye, kaasoo ay ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo sidii uu dunida uga dhigi lahaa mid wanaagsan," ayaa lagu yiri qoraal lasoo dhigay barta Twitter-ka ee Villa Soomaaliya.
Annan ayaa waxa uu diblumaasi sarre, kaasoo udhashay dalka Ghana ee Qaaradda Afrika waxa uuna xilka Xoghayaha guud ee Qaramadda Midoobey uu hayay intii udhaxeysa January 1997 iyo December 2006, xili Villa Soomaaliya ay amaanta howlahiisa.
"Aad baan uga naxnay geerida Kofi Annan. Wuxuu ahaa dimlomaasi caalami ah oo ka go'nayd inuu ka shaqeeyo nabada caalamka. Waxuu waqtigiisa u huray hel u helida colaadaha. Dhaxalkiisa wuu sii noolaan doonaa," ayaa lagu yiri qoraalka Villa Soomaaliya.
Annan ayaa intii uu hayey Jagadda Xoghayaha guud ee QM ayaa waxuu dhowr mar jeer oo kala duwan uu soo booqday magaaladda caasimada ah ee Muqdisho, waxaana uu kaalin wayn kasoo qaatay xal u helista dagaalada garaadiyay Soomaaliya.
Geeridda lama filaanka ah ee ku timid Kofi Annan waxaa si wayn uga fal-celiyay caalamka, iyadoo hoos lo dhigay calanka Qaramada Midoobey, si loogu xushmeeyo xogyihii hore, oo mudo 10 sano ah soo hogaamiyay.
India ayaa kamid ah dalalka ay ku xiran yihiin maxaabiista Soomaaliyeed ee laga qabtey...
Soomaliya 25.08.2018. 23:42
Soomaaliya iyo Ethiopia oo iska-kaashanaya dagaalka Al-Shabaab
Soomaliya 17.06.2018. 12:30
Cawad oo daboolka ka qaadey sababta Farmaajo uga baaqday Shirka UN-ka
Soomaliya 27.09.2018. 10:55
Shil gaari oo khasaaro sababay oo ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 07.07.2018. 10:50
Farmaajo oo ku wajahan China iyo ujeedka socdaalkiisa
Soomaliya 14.08.2018. 09:00
Hab-dhaqanka ilaalada Villa Somalia oo si wayn loo dhaliilay
Soomaliya 25.07.2018. 10:34
Keating oo kulamo kawada Muqdisho xilli waqtigiisu dhamaanayo
Soomaliya 01.06.2018. 20:51
Vladimir Putin iyo Kim Jong-un oo kulmay markii ugu horeysay 25.04.2019. 07:19
Miyuu Donald Trump la maseyri doonaa kulanka Kim iyo Putin? 25.04.2019. 06:31
Cadowga Soomaaliya ee aysan isku mowqif ka hayn Farmaajo iyo Khayre 25.04.2019. 06:04
Maxay tahay sababta jilaaga Sunny Deol uu ugu biiray siyaasadda? 24.04.2019. 22:50
10-jir aan gacmo ku dhalan oo hanatay bilad far-qurxin 24.04.2019. 19:44
Yemen oo bogaadisay doorka PL ee qaabilaada qaxootiga Yamaniyiinta 24.04.2019. 17:41